Dimampolo taona taorian’ny hetsik’izy ireo tamin’ny 1968, tohizan’ireo Meksikàna mpianatra ny dian’izy ireo anoherana ny herisetra sy ny tsimatimanota · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Giovanna Salazar, Laura Vidal Nandika (en) i Stephanie Crane, Christelle Djeukeu, avylavitra
Voadika ny 14 Janoary 2019 8:16 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, polski, English, عربي, Français, Español
Havia, 2018 : hetsika nokarakarain'ny mpianatra ho fahatsiarovana ny tsingerintaonan'ilay ‘Diaben'ny fahanginana’ tao Meksikô. Havanana, 1968 : hetsika nataon'ny mpianatra teo amin'ny kianja fototra tao Meksikô. Sary havia, an'i “Cel·lí” (sehatra ho an'ny daholobe) ary havanana “ProtoplasmaKid” (navoaka nampiasàna ny fahazoandàlana Creative Commons CC-BY-SA 4.0).
Raha tsy itondràna fanamarihana manokana dia mankany aminà pejy amin'n'y teny espaniôla ny rohy rehetra.
Hetsika goavana maromaro nataon'ireo mpianatra [en] hanoherana ny herisetra no nitranga tany amin'ireo tanàna rehetra tao Meksikô nandritra ny volana Septambra 2018. Fahasahiranana toy izay efa natrehan'ireo tamin'ny 50 taona lasa ihany no atrehan'ireo mpianatra ankehitriny, hoy ny fanohanan'ny Hetsika Meksikàna 1968 [en], tohin'ireo fanoherana sy fihetsiketsehana nitakiana mba hampitsaharana ny herisetra ataon'ny fanjakàna.
Mitohy ny tolona hanoherana ny herisetra, raha mahatratra 30.000 kosa no nifamory tamin'ny 6 Septambra 2018 ireo mpianatry ny oniversite, isan'izany ireo avy amin'ny Oniversite mizaka tena ao Meksika (UNAM), izay oniversitem-bahoaka lehibe indrindra [fr] ao Meksika, mba hanao fihetsiketsehana goavana:
— Cooperativas Tlalpan (@HechoenTlalpan) 6 de septiembre de 2018
An'aliny marobe ireo mpianatra avy amin'ny UNAM, IPN, UAM, UACM, ENAH, UPN, ireo mpiofana ho mpampianatra (ankoatra ireo marobe hafa) tonga niaraka taminà fitakiana iray:
Esory ireo porros ao amin'ny UNAM !
Esory any amin'ny oniversite ireo porros !
Ho ela velona ny mpianatra !
Fihetsiketsehana tohin'ireo hetsika efa nitranga andro telo talohany izy io, tamin'izany ireo vondrona mpisetrasetra [en] antsoina hoe « porros » no voalaza fa nanafika mpianatra tao amin'ny fakiolte fianarana momba ny Soratra sy ny Siansa Maha-olona. Notakian’ ireo mpianatra ny handraisana am-pilaminana mpampianatra sy fitsaràna hatao amin'ireo namono ilay tovovavy mpianatra tao amin'ny fakiolte io, Miranda Mendoza, maty tamin'ny Aogositra 2018.
Amin'ny ankapobeny, takian'ireo mpianatra ny hisian'ny fiantohana bebe kokoa any anatin'ireo fakiolté ampolony maro, sekoly, akany sy ivontoerana fikarohana ao amin'ny UNAM. Tafiditra anatin'ny fitakian-dry zareo ihany koa ny fanilihana ireo vondrona porros izay toa hoe nahazo tombondahiny ara-politika na ara-toekarena noho ny nanafihany an-kerisetra ireo fihetsiketsehana no sady nanozongozonany ny fiainan'ireo mpianatra.
“Zafikelin'ny 68 izahay”
Endrika famantarana ny faha-50 taonan'ny Hetsika Meksikàna 1968 ireo fihetsiketsehana misy amin'izao fotoana izao, izay ny fitakiana dia tsy misy hafa fa nitakiana ny fanafahana ireo gadra politika, ny fialàn'ny antoko teo amin'ny fitondrana, fahalalahana ara-politika misimisy kokoa, ary hatramin'ny fiovàna demaokratika mba hampitsaharana ny fitondràna tsy refesi-mandidy.
Tamin'izany fotoana izany, fanonganana fitondràna no fomba fahitàn'ny governemanta ireny hetsipanoherana ireny, fanongànana nokarakarain'ireo vondrona kaominista ary fanohintohinana ny filaminan'ny firenena. Noho izany, tamin-kerisetra sy habibiana no namaliany azy.
Marobe ireo diabe, fitorevahana ary hetsipanoherana nitranga tamin'ny 1968, toy ny “Diaben'ny fahanginana’ tamin'ny 13 Septambra 1968, nandritra izany dia nanao fehivava fotsy ireo mpanao fihetsiketsehana mba hanoheran-dry zareo ny fahanginan'ny governemanta nanoloana ilay Hetsika, ary koa ny fampiasàny herisetra namelezana ireo mpianatra tamin'ireo fihetsiketsehana talohan'io, tamin'io taona io ihany.
Ny 2 Oktobra 1968, teo amin'ny 10.000 ireo mpianatra nikarakara diabe am-pilaminana tao amin'ny tananan'i Tlatelolco ao Meksikô, saingy tamin-kerisetra mahatsiravina no nandravan'ny governemanta meksikàna ny fivorian-dry zareo. Efa ho 300 ireo olona maty tamin'izany [en] ary ankehitriny io loza nahatsiravina io dia tsarovana ho toy ny “fandripahana tao Tlatelolco.”
Ho an'ny taona 2018, arakaraky ny nanakaikezan'ny fotoana fankalazana ireny tranga manan-tantara ireny, nanapaka hevitra hampiseho ny firaisankinany amin'ny tantara ireo mpianatra, tamin'ny alàlan'ny famerenana indray ny “Diaben'ny fahanginana” natao tamin'ny andro mitovy, ny 13 Septambra. Fomba iray ihany koa io ho azy ireo ho entina manome voninahitra ireo olona izay nitanjozotra tamin'ireo arabe ireo noho ny antony mitovy amin'ny an-dry zareo ihany.
Dimampolo taona aty aoriana, diabe, tsangambato fahatsiarovana ary sary mampiseho ny fampitahàna ireo hetsika tamin'ny lasa sy izay misy ankehitriny no nifampizaràna teny anaty tambajotra sôsialy, tamin'ny tenifototra toy ny #MarchaDelSilencio sy ny #A50Del68 :
— Veka García (@La_Tinisima) 6 de septiembre de 2018
Fivoriambe any amin'ireo Toerana Fonenan'ny mpianatry ny oniversite.
Ery ambony amin'ny havia ny tamin'ny1968, ao amin'ny havanana ny 2014 ary eo ambany ny fifamoriana tamin'izao 2018 izao.
An'ny mpianatra ny fahefana!
Ny “Animal Político” dia nikarakara andianà tantaran'ny 1968, navoaka tamin'ny vaninandro mitovy amin'ireo diabe manantantara. Ireo hafa mpanao gazety toa an'i Leopoldo Gómez kosa nifantoka tamin'ireo hetsiky ny mpianatra omaly sy androany :
Tsy resaka fihetsiketsehana hanoherana ny famoretana fotsiny intsony ity, fa fanoherana ny tsy fahaizamanaon'ny governemanta. Tamin'ny 1968, nitolona nanohitra ny fanararaotana nataon'ny governemanta ireo mpianatra. Ankehitriny, mitaky zavatra bebe kokoa ry zareo mitady governemanta mendrika. Dimampolo taona aty aoriana, tsy niova ireo fitakiana: fampitsaharana ny tsimatimanota. Tamin'ny 1968, tao an-tsain-dry zareo ny hampitsahatra ny tsimatimanota eny anivon'ny governemanta. Ny 2018, ny tanjona dia ny hampitsaharana ny tsimatimanota ataon'ireo mpanao heloka bevava izay nifanaovan'ny governemanta fifanarahana miafina.
Ny herisetra raiki-tampisaka ao Meksika, iray ahafatesana olona 70 isanandro, dia iray monja ihany amin'ireo antony mahatonga ireo fihetsiketsehana. Tamin'io taona io ihany koa no nanamarihana ny faha-4 taonan'ny nanjavonan'ireo 43 mpianatra tao Ayotzinapa [en], samy notsarovana daholo :
Mpanao fihetsiketsehana mifamory eo anoloan'ilay tsy-sary-fahatsiarovana ao Ayotzinapa mba hanomezana voninahitra ireo mpianatra niisa 43 nanjavona tao Iguala.
Tsipihan'ilay mpahay tantara, Octavio Solís, ny hery an'ohatra ananan'ireo fihetsiketsehana tamin'ny 1968 izay “nandresen'ny ‘saina mahay mamorona’ nanoloana ny fitondràna” :
“Ny hetsiky ny mpianatra tamin'ny 1968 dia nampivondrona ireo fitakiana marobe avy amin'ny tontolom-piarahamonina isankarazany tsy mba afaka naneho hevitra an-kalalahana. […] Izay rehetra hetsika faneriterena na andrana hifehy, dia niteraka setriny feno famoronana sy navitrika.[…] Tsy naharitra afa-tsy volana roa ilay hetsika, saingy araka izay lazaina ombieny ombieny, misy andro, herinandro, volana izay afaka mahafehy taona marobe […] Toy ny fanamby nataon'ireo tanora ho an'ny fahanginana [nandritra ilay diabe nampitondraina izany anarana izany rahateo] izay nitondra ny fahamendrehana tsy ho very anaty fanadinoana : sarivelona iray maharitra hatramin'izao androntsika izao’ efa ho antsasaka taonjato iray aty aoriana”.
Nandika (fr) i Christelle Djeukeu